मात्र बाँकी माथि आफ्नो जीवन मूल्याङ्कन गर्छ नगर्ने, तर, त्यसको विपरीत, अन्तिम स्थानमा राख्दछ एक व्यक्ति, सुरक्षा सेवा को रक्षक को बाँध्न कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ। दिमित्री Razumovsky - अरूलाई थुप्रै खातिर आफ्नो जीवन जो राखे, र तिनीहरूलाई को एक यस्तो साहसी नायक को उदाहरण। उहाँले युद्धमा मर्न गर्न मर्यादा विश्वास गरे। कि समयमा के भयो छ , Beslan मा आतंकवादी हमला भएको कर्नल छोराछोरीको जीवन सुरक्षा, गोली लाग्यो जब। यो दुःखद घटना विशेष सेना देखि 10 सैनिकहरु को मृत्यु भएको छ। कुल 186 बच्चाहरु सहित 334 मान्छे, मारे।
बाल्यकाल र नेतृत्व गुण को प्रकटीकरण
1968 मा, dima Ulyanovsk, यो मा proletariat को प्रसिद्ध मूल नेता को शहर मा जन्म भएको थियो। पहिलो - स्कूलमा №9, र त्यसपछि - ज्ञान वी आई लेनिन को समयमा प्राप्त जो उच्च विद्यालय №1, मा: सबै बच्चाहरु आफ्नो उमेर जस्तै, त्यो पढ्न र लेख्न सिक्न गए। कार्यकता, खेलाडी र एक एक विद्यार्थी - त्यतिबेला बाद संस्थाले यस्तो दिमित्री Razumovsky रूपमा मात्र सबै भन्दा राम्रो विद्यार्थी जान्न सक्छ।
नायक को स्मृति समर्पित फिल्म dima गरेको आमा, सधैं उहाँलाई गीतहरू गाउन एउटा बच्चा सोधेर उहाँले धेरै प्रकारको केटा थियो सम्झे, (मेरी आमा संगीत शिक्षकको रूपमा काम), र उत्तरार्द्ध आवश्यक "एक मातृभूमि कसरी सुरु गर्न" जस्तै आवाज हुनुपर्छ। उहाँले चाहनुहुन्छ के सोधे, बच्चा, जवाफ "कमान्डर।"
खेल र यसको शारीरिक प्रशिक्षण गम्भीर मनोवृत्ति युवा बक्सिङ सफल मदत गरेको छ। 1985 मा dima युवाहरूले बीच सोभियत संघ को च्याम्पियन भयो।
खराब यसलाई अहिले छ वा सोभियत शासन गर्न belonged रूपमा, तर त्यो समय को संस्कृति Patriotism, सम्मान को विकास र न्याय एक अर्थमा केन्द्रित थियो। Dima मनपर्ने चलचित्र 8 फिलिमहरु हुन्छन् र सोभियत सीमाना गार्ड सेवा बारे बताएको "राज्य सीमाना", थियो। ऐतिहासिक-साहसिक चलचित्र फिलिम कारण केटा आफैलाई सोचा उच्च विद्यालय देखि स्नातक पछि सैन्य मामिलामा अध्ययन र मातृभूमि सीमाहरु रक्षा गर्न चाहन्छ, त्यो।
मास्को को फ्रंटियर स्कूल मा भर्ना, त्यो हो, न्याय को लागि एक लडाकु, "असुविधाजनक छात्रा सैनिक" उपनाम थियो। स्कूलका साथीहरू बीच मान्छे त्यो दर्जा र Insignia बावजुद, कुनै पनि सत्यको अनुहार मा बनाउन सक्छ किनभने, अधिकार थियो। सोभियत सेना मा, प्रशिक्षण विकल्प मा गणना र उच्चतम गुणस्तर प्रदर्शन गर्न तिनीहरूलाई अभ्यास गर्दै गर्दा दिमित्री Razumovsky, जसको जीवनी आफ्नो जीवनको हरेक चरण मा छ, इच्छा सँगसँगै, सिद्ध इमानदार र साहसी।
एक मग गरेको खेल छ
देर eighties त्यहाँ एक्लै बिदा देखि फिर्ता विद्यार्थी मा आक्रमण जवान मान्छे को अवस्थामा छन्। कुराकानी गिरोह को एक एक चुरोट दिन वर्दी मा एक मानिस एक अनुरोध संग थाले। एक पटक, Dmitri साँझ निर्माण गर्न हतारमा हुँदा उनले निकोटीन को नै मुद्दा मा loafers भेटे। Hooligans सबै पछि, त्यसको विपरीत तिनीहरू बक्सिङ च्याम्पियन पछिल्लो गर्नुपर्छ भनेर थाहा थिएन। चुरोट को सट्टा दिमित्री blows वितरण गर्न थाले। जवान मानिसहरू एक गिरोह तुरुन्तै फिर्ता तल भाग्यो र उम्कने retreated।
दिमित्री Razumovsky, सीमा स्कूलमा तालिम भइरहेको अफगानिस्तान मा प्राप्त गर्न चाहन्थे, तर अध्ययन (1990) को अन्त गरेर सैन्य संघर्ष पहिले नै बसे गरिएको थियो। त्यसपछि एक जवान लप्टन को Afghan-ताजिक सीमाना मा सेवा सुरु गर्न कामना। एयर आक्रमण समूह (बाहिरु) को टाउको - सुरुमा उहाँले नाकामा को उप प्रमुख र पछि थियो।
दक्ष theorist Dmitri Razumovsky (भविष्यमा रूस हिरो) आगामी सञ्चालनको प्रत्येक चरण गणना गर्छ। को लप्टन, Afghan आतंककारीहरूले को खोज मा गए जो संग तिनीहरूले फेला र निर्मूल निश्चित हुन समूह: यस प्रभावशाली परिणाम दिएको छ। रेकर्ड छ संघर्ष एकै रातमा थाले। राम्रो लाग्यो-बाहिर Functioned र अनुमति टोली आफ्नो वार्ड को ज्यान बचाउन। हुनत धेरै पीडित ताजिकिस्तान को सीमाना मा सेवा समयमा, कि त अधीनस्थ दिमित्री को सिपाहीहरूले एक चोट छैन।
1993 मा, आत्माको आक्रमण 12 औं नाकामा, त्यहाँ बारेमा 300 मानिसहरू थिए। को चालक दल बलियो बनाउन सीमाना detachment केवल एक पैदल लड वाहन थियो र 80% staffed थिए। माइकल Mayboroda, र अर्को 25 सैनिकहरू - यो unequal युद्धमा मा नाकामा को मुख्य र सबै भन्दा राम्रो मित्र दिमित्री मारे। Razumovsky किनभने अवस्था सर्तहरू रिपोर्ट छ, र आदेश दिन छैन, उच्च आदेश द्वारा विश्वासघात रूपमा वर्तमान लडाई वर्णन गरे। एक वर्ष पछि, छुट्टी मा गर्दा, दिमित्री Razumovsky बाहिर नाकामा आत्माको मा एक साहसी आक्रमण बारे, जो एक परिणाम थप7सीमाना गार्ड मारिए रूपमा भेट्टाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले "तोप चारा" को रूपमा सेवा गर्न तयार छ कि एक साक्षात्कार गर्न "Komsomolskaya Pravda," दिने, तर केवल राज्य को चासो थाह आफ्नो पतित मित्र बदला लिन लिन निर्णय गरे। उहाँले सार्वजनिक रूपमा superiors आरोप र सोधे: "कहाँ रूसी, रूसी को हेरविचार छ?"।
त्यसपछि कप्तान Razumovsky को ताजिक सीमाना मा मेहनत चार वर्ष पछि सेवाबाट खारेज गरिएको थियो छ। यो कारण दिमित्री सबै आफ्नो जीवन लडे जसको लागि धेरै न्याय थियो।
दिमित्री पत्नी, उहाँले आफ्नो मित्र माइकल को अन्त्येष्टि मा भेट जसलाई एरिका, उहाँले विशेष एकाइ "अल्फा" मा सेवा गर्ने सपना थियो बताए। उहाँले "लेफ्टिनेंट कर्नल" को दर्जा प्राप्त जहाँ "Vympel", - तर भाग्य रूपमा उहाँले अर्को एकाइ थियो। दिमित्री Razumovsky को कमांडो को चासो को वस्तु भए। व्यावहारिक अनुभव अधिकारी यसको सिफारिसहरू र निर्देशन अध्ययन, बाहिर लाभ।
सेवा, थाले जहाँ हरेक गोप्य छैन, कहीं जान सक्नुहुन्छ जो बिरामी पनि व्यक्ति को नाम। यो यात्रा कुनै पनि समयमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, र जहाँ, यो पनि आफ्नो पत्नी थाहा छैन। उहाँले पूर्णता तिनीहरूलाई जस्तै Razumovsky को अभ्यास गर्न आफ्नो subordinates देखि माग।
अपरेसन "Vympel" गोप्य, तर दिमित्री को आदेश अन्तर्गत सबै पारित प्रभावकारी र bezzhertvennymi थिए। एक बाहेक ...
अगस्ट 2004। Dmitri छुट्टी र जा मा आमाबाबुको Ulyanovsk जाने, सेप्टेम्बर 1 पछि थियो। तर त्यसपछि अर्को यात्रा। Beslan मा सेप्टेम्बर 1 मा विद्यालय एक आतंककारीहरूले द्वारा जफत भएको थियो। यो डाकुओं को हात मा तेस्रो दिन 1128 hostages थिए थियो। एक विस्फोट स्कूल मा भयो र भवन आँधी गर्न थाले। Sniper बुलेट जस्तै एक पटक थियो त्यो, युद्धमा मृत्यु भएको थियो, Razumovsky थिच्नुहोस्।
त्यसै वर्ष दिमित्री Razumovsky को सेप्टेम्बर6- posthumously रूस को हिरो, एक राष्ट्रपति उर्दी अनुसार।
तीन वर्ष शोकमा बितिसकेको छ। एक बच्चा - Ulyanovsk को आफ्नो पैतृक शहर मा, केन्द्रीय वर्ग मा स्कूल वर्ष को शुरुवात आफ्नो हात मा, एक चलिरहेको सैनिक को रूप मा दिमित्री Razumovsky एउटा स्मारक छ। सजीले उहाँले रूसी संघ को हिरो जन्म भएको थियो जहाँ, र जिम №1 मा घर मा माउन्ट।
दिमित्री Alexandrovich को पुरस्कार:
माइकल र Alexey: आज, आफ्नो पत्नी एरिका दुई छोरा, दिमित्री छ।
अभिनेत्री जुलिया Sules: जीवनी, Filmography
अभिनेत्री मारिया Andreeva: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, फोटो। सबै भन्दा राम्रो भूमिकाको
लारा Chaklin: जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
Kozeruk Anatoliy Nikolaevich। जीवनी
कामको खोजी गर्न तीन आधारभूत तरिका
छालाको Ichthyosis: कारणहरू, लक्षणहरू, उपचार
तस्वीर Bogdanov-Belsky Nikolai Petrovich: नाम, विवरण
Unfading सौन्दर्य - को रिबन को रंग!
आफ्नो हातले Lightbox - वास्तविक छ! तपाईंको आफ्नै हात Lightbox कसरी बनाउने
आफ्नै हातले फ्रेम घर: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। निर्माण प्रविधि